August 2017 – enagrikkhabar
१६४ वर्षपछि पहिलो पटक फेरियो ‘मुलुकी ऐन’
काठमाडौं: जनताको पटक-पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ ।
फैसला गर्दा न्यायाधीशलाई कसुर र सजाय घटबढ गराउन सक्ने अधिकारलाई पनि कटौती गरी कसुरको न्यूनतम र अधिकतम सजायबीचको दूरी निकै कम गरिएको छ ।
अबदेखि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको छ । ऐन लागू हुनुअघिका बहुविवाहका हकमा विधेयक मौन रहे पनि लागू भएपछि बहुविवाह गर्नेका हकमा सजायको मात्रा बढाइएको छ ।
बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
पशुकरणीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी गरे दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य चौपाया करणी गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो समय तेजाब (एसिड) प्रयोगका घटना बढ्दै गएकोमा विधेयकमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
तेजाब प्रयोग गरी अनुहार कुरूप पारे पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, शरीरको अन्य अंग कुरूप पारे वा शरीरमा पीडा पुर्‍याए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । छाउपडी प्रथालाई पनि कसुर ठहर गर्दै विधेयकमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन’, विधेयकको दफा १३८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
सरकारले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा मुलुकी शब्द हटाएर ५ वटा विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । ‘मुलुकी’ शब्द जनप्रिय भइसकेको तथा नेपालको कानुनी प्रणालीमा विशिष्ट स्थान ओगटेको भन्दै ऐनमा मुलुकी शब्द राख्नुपर्ने माग उठेको थियो ।
बुधबार संसद्मा अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता पारित गर्नुअघि कानुनमन्त्री थापाले मुलुकी शब्द राख्न एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राखेको संशोधन स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि दुवै विधेयक पारित भएका थिए ।
हामीले मुलुकी ऐनलाई टालटुल गरेर चलाउँदै आएका थियाे। तर, आधुनिक र वैज्ञानिक थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मूल्य-मान्यताअनुकूल पनि थिएन ।
आजको कानुन नेपाल र नेपालीका लागि मात्र लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले कामचलाउ ऐनलाई पूरै परिवर्तन गर्न जरुरी थियो । न्यायमा अनुशासन, कानुनप्रतिको जवाफदेहिता बनाउनु जरुरी थियो । यो फौजदारी संहिता वैज्ञानिक, सरल र समान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्य-मान्यताअनुसार बनेको छ । जन्म सजायको मापदण्ड थिएन । समयानकूल र व्यवस्थित बनेको छ । मुलुक ऐन प्रतिस्थापन विधेयकले बालकदेखि वृद्ध तथा धनीदेखि गरिब सबैलाई जवाफदेही ढंगले काम गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशका फौजदारी विधि र मान्यताको अध्ययन गरी फौजदारी संहिता बनेको छ । फौजदारी सजायको विधि, मान्यता, परिभाषा पनि स्पष्ट गरिएको छ । समाजलाई सुधार उन्मुख र न्यायोचित बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । अन्नपूर्ण पोष्ट बाट साभार
क्यान्सरका शुरुवाती ५ लक्षणः कहिले पनि वेवास्ता नगर्नुस्
क्यान्सर गम्भिर प्रकारको रोग हो । जुनसुकै क्यान्सर लागेपनि पैसा र शरीर दुवैको क्षति हुन्छ । तर क्यान्सरलाई बेलैमा पहिचान गर्न सकियो भने रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ ।
क्यान्सरका लक्षण देखिए भने पनि आत्तिइ हाल्नु हुँदैन । तर नियमितरुपमा जाँच र चिकित्सकको परामर्स भने लिनु पर्छ । हरेक जसो क्यान्सरमा देखिने ५ लक्षण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यी लक्षण देखिएभने कहिले पनि वेवास्ता नगर्नुस् ।
३ दुब्लाउँदै जानु वा वजन कम हुनु
मान्छे संग संगै बोल्ने चरा नेपालमा भेटियो, चरा र मान्छे बिचको यो प्रेम हेर्नुस (भिडियो)
अङ्कुर पलाएको (टुसा उम्रेको) अन्न या गेडागुडीमा प्रशस्तै पाइने पौष्टिक तत्वहरू हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको लागि अति नै फाइदाजनक हुन्छ। यसमा हुने फाइबरले गर्दा हाम्रो भोक पनि मेट्दछ भने शरीरलाई प्रशस्तै ऊर्जा पनि प्रदान गर्दछ।
टुसा पलाएकोअन्नको स्वास्थ्य फाइदालाई मध्यनजर गर्ने हो भने अधिकांश रोग तथा समस्यालाई यसले सजिलै रोकथाम गर्न सक्दछ। शरीरको पाचनप्रक्रियामा सुधार, मोटोपनाबाट राहत, रक्तअल्पताको रोकथाम, कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण, रक्तचाप नियन्त्रण, शिशुको मस्तिष्क विकास, क्यान्सरबाट बचाउ, छालाको स्वास्थ्यमा सुधार, आँखाको शक्तिमा वृद्धि अनि प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने काम ‘टुसा पलाएको अन्न’ले गर्दछ।
माथि नै उल्लेख गरेअनुसार अङ्कुरित अन्नमा प्रशस्त भिटामिन-ए पाइन्छ। र हाम्रो आँखाको दृश्य शक्तिलाई बढाउने एउटै मात्र तत्व भनेको भिटामिन-ए नै हो। यसमा हुने एण्टिअक्सिडेन्ट तत्वले आँखाको रेटिनाको कोषलाई फ्री राडिकलबाट बचाउँदछ र उमेरसँगै रेटिनाको ह्रास हुने क्रमलाई पनि घटाउँदछ। त्यसैले चस्मा लगाउन छोड्न चाहनुहुन्छ अनि यो सुन्दर संसारलाई राम्रोसँग नियाल्न चाहनुहुन्छ भने दिनहुँ ‘अङ्कुरित अन्न’ खानुहोस्।
अति महत्वपूर्ण नोटः
तपाई हाम्रो भान्सामा दैनिक यसरी पाक्छ विष हेर्नुहोस यो भिडियो
तपाईले आफुलाई साच्चै १० वर्ष कम देख्न चाहानुहुन्छ भने यो बिधि हप्तामा कम्तिमा पनि अनिवार्य एक पटक गर्ने पर्ने हुन्छ, सके हप्तामा दुई /तीन पटक आवस्कता हेरर गर्नुहोस् । एजेन्सीको सहयोगमा
दार्जिलिङमा बढ्यो तनाव, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यालयमा आगजनी
दार्जिलिङ । दार्जिलिङ रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यालय आगजनी भएको । उक्त कार्यालयमा बिहीबार आगजनी भएको थियो । आगो कसले लगायो ? त्यो भने अझै खुल्न सकेको छैन । आगजनीबाट कार्यालयमा राखिएका सामान र कागजात सबै जलेर नष्ट भएका छन् ।
त्यसपछि उग्र भएका आन्दोलनकारीहरुले एक गाडीमा समेत आगजनी गरेका छन् ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी प्रवक्ता विनिता रोकाले कार्यालयमा आगजनी हुनु एक गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताइन् ।
कडा सुरक्षाका बाबजूद भवनमाथि आधा रातमा कसरी आगो लाग्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले यसमा प्रहरीको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाइन् । उनले दुई महिनादेखि जारी आन्दोलन तोड्न सरकारले गरेको प्रयास विफल भएको बताइन् ।
केन्द्रीय सरकारले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन नगरेसम्म दार्जिलिङमा आन्दोलन जारी रहने मोर्चाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । आन्दोलन र बन्द भएको ५८ दिन नाघिसकेको छ ।
दार्जिलिङमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ ।
कुन कुन वस्तुमा के मिसावट गरेको छ यसरी पत्ता लगाउनुस्
१.पेट्रोल : एक दुई थोपा पेट्रोल हत्केलामा राख्दा शुद्ध पेट्रोल भएमा तुरुन्त उडेर जान्छ । यदि अन्य कुनैबस्तु मिसाएको भएमा थोपा रहिरहन्छ ।यसलाई अर्को तरिकाले पनि परिक्षण गर्न सकिन्छ । एउटा सेतोे कागजमा पेट्रोलको एक दुई थोपा राखेर हेरेमा शुद्ध पेट्रोल भए उडेर जान्छ,मिसावट भए दाग देखिन्छ ।
२.दूध : दूधमा केही बस्तु मिसाएको थाहा पाउनका लागि कागजमा दूधको एक दुई थोपा राख्नु पर्दछ यसरी राख्दा पानी मिसिएको दूधले तुरुन्तै कागज भिज्छ भने शुद्ध दुध तुरुन्तै कागजमा फैलिदैन । अर्को तरिका चाहि उमालेर पत्ता लगाउने हो यदि दूध उमालेर राख्दा पातलो तर लागेमा दूधबाट चिल्लो भाग झिकेको वा दूधमा धेरै पानी राखेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
३.आइसक्रिम : दूधको आइसक्रिममा पिठो मिलाएको हुनसक्दछ, यसलाई पत्ता लगाउनको लागि आइसक्रिमलाई पानीमा हाली घोल्नुपर्दछ ।
४.खानेतेलमा : खानेतेलमा मोबिल जस्ता अखाद्य तेल मिसाइएको हुन्छ । यसको पहिचान गर्न तरकारी पकाउँदा आउने गन्ध सुँघेर पत्ता लगाउन सकिन्छ् ।
५.खुर्सानी :रातो खुर्सानीको धुलोमा इट्टाको धुलो आदि मिसाएको हुन सक्छ । पानी राखी घोल्दा पत्ता लाग्दछ ।
६.मह : महमा चिनी मिसाएको हुन्छ महमा चिनी मिसाएको थाहा पाउन पानीमा मह राखी घोल्नु पर्दछ यसरी घोल्दा यदि महमा चिनी मिसाएको हो भने चिनी तुरुन्तै घुल्छ ।
७.केरा : पाकेको केराको भित्री भागमा साह्रोपन रहिरहेमा वा केराको भेट्नु तुरुन्तै भाचिने भएमा औषधि राखी पकाएको भन्ने बुझ्न पर्दछ ।
अझै केही दिन भारी वर्षा हुन्छ : मौसम विभाग
मनसुन सक्रिय भएसँगै देशैभर बदली र वर्षा भएको छ ।झण्डै एक महिनादेखि कमजोर रहेको मनसुन बिहीबारदेखि बढी सक्रिय भएकाले देशभर वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बिहीबार रातिदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर वर्षा भएको र यो क्रम अझै केही दिन जारी रहने मौसमविद् सुजन सुवेदीले बताए ।
‘मनसुन नेपालमा बढी सक्रिय भएकाले देशभर बदली र वर्षा हुने देखिन्छ, यसअघि वर्षा भए पनि मनसुन धेरै सक्रिय नहुँदा पर्याप्त वर्षा भएको थिएन, तराईका पूर्वी र मध्य भेगमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ’, उनले भने
दाँतमा परेको प्वाल पुर्ने घरेलु उपाय
काठमाडौं, — दाँतमा कसरी प्वाल पर्छ ? दाँत दुरुस्त भयो भने त्यसले सुस्वास्थ्यको संकेत गर्छ । दाँतको राम्रो ध्यान दिइएन भने ती कुहिन थाल्छन् । यस्तो अवस्थामा मुखमा अड्केका खानेकुराहरू मुखका ब्याक्टेरियाको सहायतामा एसिडमा परिणत हुन्छन् । यसले दाँतमा प्वाल बनाउँछ । यही प्वाललाई अंग्रेजीमा क्याभिटी भनिन्छ । क्याभिटी बन्ने र त्यसलाई उपचार गर्ने साँचो हाम्रै हातमा छ । हामीले अस्वस्थ खाना पूरै छोडेमा मात्र दाँतमा प्वाल बन्न पाउँदैन । खाना खाएपछि ब्रश गर्ने, कुल्ला गर्ने गरिरहनुपर्छ । अनि लगातार दाँत दुख्यो वा झमझम भयो भने तत्कालै दन्तचिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।